Vidio: A na - achọpụta ihe ohuru site na idozi nsogbu | Martech Zone
Na Fraịdee, enyere m ohere ịtụnanya isonye na Summit Innovation Summit nke Compendium. N'okpuru nduzi nke Onye isi ala Frank Dale, nwere echiche sitere n'aka Blake Matheny, yana nkwado nke onye nchoputa Chris Baggott na Sales VP Scott Blezcinski, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara "oge" na-arụ ọrụ yana, kama itinye ụbọchị maka ihe ọhụrụ.
Chris ji mbido ahụ were akụkọ dị ịtụnanya banyere otu ọ dara n'otu azụmahịa, mana mgbe ọ matachara nsogbu ahụ, wuru ụlọ ọrụ ọzọ dị ịtụnanya - Kpọmkwem Ngwaọrụ.
Isi ihe dị na akụkọ ya bụ na ihe ọhụrụ abụghị ihe okike nke ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ ihe dị mma… Ọ bụ maka ịmata nsogbu ma gbalịsie ike ịmata azịza ya. N'ime otu ụbọchị, ìgwè 3 n'ime Compendium chọpụtara nsogbu atọ dị iche iche ndị ahịa ha nwere:
Mepụta ọdịnaya dị mfe.
Kwalite ogo ọdịnaya.
Vingkwalite ọnụego ntụgharị na blog Oku ka Action.
Ndị otu a kpọtụrụ ndị ahịa dị mkpa, rịọ maka enyemaka ha, chebara echiche echiche, ọbụnakwa buru amụma mmetụta niile gbasara azụmaahịa a. Enweghị m ike ịkekọrịta azịza - naanị na nke ọ bụla ga-abụ nnukwu onye na-agbanwe egwuregwu maka ụlọ ọrụ ha. Nile na otu ụbọchị!
Yourlọ ọrụ gị ọ na-arụsi ọrụ ike na-akwalite ihe ọhụrụ dị ka nke a? Ọ bụrụ n'ịchọta na azụmaahịa gị kwa ụbọchị na-adọta nrụpụta ọrụ ndị otu gị na mmụọ mmụọ - nke a nwere ike ịbụ naanị azịza ziri ezi iji mee ka azụmahịa gị, ndị ọrụ gị, na idozi ezigbo nsogbu maka ahịa. O doro anya na m ga-etinye nke a na ụlọ ọrụ anyị!
Ngosipụta: Abụ m onye na - ekenye ihe na Compendium, gaa n'ihu na - enyere ndị ahịa ha aka, Blake arụkwala ọrụ ụfọdụ dị oke mkpa Highbridge.
Tags: mmmmmmmmmmmmmchris akpakomendiumnzuko ohuru